Umthandazo kwigazi likaKristu elixabisekileyo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Umthandazo kwigazi likaKristu elixabisekileyo kuyasebenza emntwini ukuba azinikele kwisimboli yoxolelo lukaThixo eluntwini. Ukuba ufuna ukufumana ukhuseleko lweGazi likaYesu eliXabisekileyo, sikubonisa lo mthandazo umhle kangaka.
1 Umthandazo kwigazi likaKristu elixabisekileyo: Yintoni igazi likaKristu?
2 Igazi likaKrestu Umthandazo
3 Uyintoni umsebenzi woMthandazo kwigazi elixabisekileyo likaKristu?
4 Uxolelo neGazi likaKristu
Umthandazo kwigazi likaKristu elixabisekileyo: Yintoni igazi likaKristu?
Into ebizwa ngokuba "ligazi likaKristu" yintetho esetyenziselwa ukubhekisa kwidini likaYesu nokucamagushela uxolelo loluntu. Ibizwa ngokuba liGazi likaKristu kuba ngokoqobo, uYesu Krestu wopha wasweleka emnqamlezweni kwaye elo gazi lalisebenza njengedini ukuze kuxolelwe izono zehlabathi. Umthandazo "Igazi likaKristu linamandla" kuthatha amandla xa ukhumbula ukuba unyana kaThixo wakwazi ukufumana uxolelo kubo bonke ngokufa kwakhe. Unokuba nomdla kwi Umthandazo kuSanta Anthony ukufumana uthando.
Igazi likaKrestu Umthandazo
Apha unokujonga iifayile ze- Umthandazo kwigazi likaKristu elixabisekileyo, ukuyicengceleza unokholo, ngethemba, zibeke kuye ukuze ukonwabele ukukhuselwa kwayo ngamandla nangokobuthixo:
Egameni lakho, nangamandla egazi lakho elixabisekileyo, sitywina wonke umntu, isenzo okanye isiganeko apho utshaba lufuna ukusenzakalisa.
Ngamandla eGazi likaYesu ndiyazigquma, sigubungela kwaye sivale onke amandla atshabalalisayo emoyeni, emhlabeni, emanzini, emlilweni, phantsi komhlaba, enzonzobileni yesihogo nase el mundo apho siza kuhamba khona namhlanje. Ngamandla egazi likaYesu sophula konke ukuphazamiseka kunye nezenzo zongendawo.
Siyamcela uYesu ukuba athumele emakhayeni ethu nakwiindawo zokusebenzela iNtombikazi enguMariya eNgcweleyo ehamba noMariya oyiNgcwele, uSaint Gabriel, uSaint Raphael kunye nenkundla yabo yeeNgelosi eziNgcwele.
Ngamandla egazi likaYesu ndiyazigquma, sigubungela kwaye sitywina indlu yethu, bonke abahlala kuyo (chaza ngamnye kubo), abantu iNkosi eya kubathumela kuye, kunye nokutya kunye nempahla ngesisa usithumela ukuba sixhase.
Ngamandla egazi likaYesu ndiyazigquma, sigubungela kwaye sitywinise abantu, izilwanyana, izinto, umoya esiwuphefumlayo, kwaye ngokholo sibeka isangqa segazi ejikeleze usapho lwethu lonke.
Ngamandla eGazi likaYesu ndiyazigquma, siyagubungela kwaye sitywinise iindawo esiza kubakho ngalo mhla nabantu, iinkampani okanye amaziko esiza kusebenzisana nawo (igama ngalinye).
Ngamandla eGazi likaYesu ndiyazigquma, sigubungela kwaye sitywinise izinto zethu kunye nemisebenzi yokomoya, amashishini abo bonke abantwana bakho, izithuthi, iindlela, umoya, umkhondo kunye naziphi na iindlela zothutho ekuya kufuneka sebenzisa.
Ngegazi lakho elixabisekileyo ndiyazigquma, sigubungela kwaye sitywinise izenzo, iingqondo kunye neentliziyo zabo bonke abahlali, iinkokheli zelizwe lethu nezeCawe ukuze uxolo lwakho nentliziyo yakho zilawule kuzo.
Enkosi Nkosi ngegazi lakho nangobomi bakho, kuba enkosi kubo sisindisiwe kwaye sikhuselekile kuyo yonke into embi.
Uyintoni umsebenzi woMthandazo kwigazi elixabisekileyo likaKristu?
Bonke abo bantu babeka ukholo lwabo kwigazi likaKristu baya kusongelwa ezingalweni zakhe kwaye baya kuxolelwa kuzo zonke izenzo zabo ezingcolileyo. Intsomi yegazi likaKristu inokuthelekiswa nomthetho kaMoses, othi kanye ngonyaka umbingeleli kufuneka enze umnikelo ngegazi lesilwanyana esibingelelweni setempile ukuze kuxolelwe izono zabantu.
Umahluko kukuba umnikelo wegazi womthetho kaMoses wawunomda, kuba kwakufuneka unikelwe unyaka nonyaka. Endaweni yoko, idini likaYesu Krestu lalikho kwaba kanye. Kungenxa yoko le nto Umthandazo kwigazi likaKristu elixabisekileyo, ukuze abantu abenza umthandazo bagqunywe ngobuThixo babo kwaye baxolelwe izono zabo.
Kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela, ukuthelekiswa kwenziwa nakwigazi ngexesha uYesu wahambisa isonka kwaye weza kubafundi bakhe esithi lo yayingumzimba negazi lakhe awabelana ngalo nabakholwayo abathembekileyo.
Uxolelo neGazi likaKristu
Kwakungenakubakho ubudlelwane noThixo ngaphandle kweGazi likaKristu kuba iGazi likaKristu lifanekisela inkqubo yoxolelaniso lukaThixo nabanye abantwana bakhe.
Kunokuqondwa ukuba ulwelo atones isonoAyingomanzi, okanye itshokolethi, okanye ikofu, okanye incindi yeziqhamo, kodwa ligazi, oku kungenxa yokuba igazi libubomi benyama. Kwibhayibhile kunokubonwa indlela uThixo alifuna ngayo igazi lezilwanyana ukuze ligubungele isono somntu, de kufike uKrestu, owayeza kuphalaza igazi lakhe elinyulu ukuze agqibezele ukucoca izono zabantu.
Lo msebenzi wenkululeko wagqitywa nge ukufa kaKristu emnqamlezweni, ngokungcwatywa aze avuswe ngomhla wesithathu anyukele ezulwini, aze ahlale ngasekunene kukaThixo uSomandla phezulu, ethembisa ukubuyela ecaweni yakhe.
Umthandazo kwigazi likaKristu elixabisekileyo Ithathwa njengenye yezona mthandazo zinamandla nezona zinamandla zamaKatolika ezikhoyo, kufanelekile ukunqanda iinjongo ezimbi, iimeko ezinobungozi kunye neengxaki ezenza uloyiko kumntu ofunda umthandazo. Njengawo wonke umthandazo, iqhutywa lukholo kunye nenkolelo, ke eyona nto ibalulekileyo kukukholelwa kuwo onke amagama athethwayo emthandazweni kwaye ubanqwenelele ngentliziyo yakho kuba kulapho ivela khona. amandla yokholo.
Into entle malunga umthandazo kwigazi likaKristu elixabisekileyo Inokwenziwa nangaliphi na ixesha, ngaphandle komhla, ixesha okanye isizathu. Ivela ezulwini, iNkosi uYesu iyaweva amazwi afundwayo kwaye ikhusela ngegazi layo bonke abo baziva ngokwenene beguqukile ezintliziyweni zabo kwaye befuna ukuziva bekhuselekile ngengubo yakhe engcwele.